Xildhibaan C/risaaq Cumar “Waxaa naloo-sheegay in aysan duuli karin diyaaradii qaadi laheyd madaxweynayaashii hore” – Kalfadhi
Xildhibaan C/risaaq Cumar “Waxaa naloo-sheegay in aysan duuli karin diyaaradii qaadi laheyd madaxweynayaashii hore”
Wafdi ay kamid yihiin Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif, ayaa maanta ku wajahan magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan, halkaasoo ay ka jiraan xaalado bani’aadanimo oo ka dhashay fatahaadii wabiga Shabeelle.
Wafdiga Madaxweynihii hore ayaa lagu waday inay Beledweyne tagaan Khamiistii la soo dhaafay, hase ahaatee roobab saacado badan ka da’ay magaalada Beledweyne uu sababay inuu xirmo garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif.
Xildhibaan C/risaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in wafdigii ay hogaaminayeen Madaxweyneyaashii hore ee dalka lagu wargeliyay in diyaaradii Baladweyne u qaadi laheyd loo diiday in Garoonka diyaaradaha ka duusho.
Sidoo kale Xildhibaan C/risaaq Cumar ayaa sheegay in diyaaradii u qaadi laheyd Baladweyne lagu xanibay amar kasoo baxay Xukuumadda Soomaaliya, isla markaana maamulka Garoonka lagu amray in aysan dhoofin karin Madaxda Madasha Xisbiyada Qaran ee dalka.
“Airpork-ka ayaa joognaa, waxaa ay aheyd in aan safarno oo aan qaadno lacag aan iska uruurinay iyo lacag madasha ay ka uruurisay dadka Soomaaliyeed. Waxaa nagula wargeliyay in diyaaradii aan raaci laheyn in aysan kici karin. Raiisul’wasaaraha ayaa rabay in uu safro, ciidankiisana waa ay joogeen, sidaasi darted ma aqaan in ay tahay Ra’iisul wasaaraha ayaa safraaya, madaxweynayaashii hore ma safri karaan”.
“Ciidankiisa hadda garoonka waa ay ka noqdeen, sabab kale nalooma sheegin”.
Madasha Xisbiyada Qaran ayuu tilmaamay in maanta magaalada Baladweyne ay gaarsiinayaan gargaar loogu talagalay dadkii ku barakacay fatahaadii ka dhacday Baladweyne.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, ay ka dhoofayaan garoonka goor dhow, kaddib markii uu safarka uu ka baaqday ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheire.
Si kastaba Madasha Xisbiyada Qaran ee dalka ayaa ku dhawaaqday $200,000 (Laba boqol iyo konton kun Dollar) oo ah kaalmo gargaar oo lagu caawinayo dadka Soomaaliyeed ee Fatahaaduhu saameeyeen.
Gudoomiyaha Guddiga Maalyadda Aqalka sare & Wasiirada Maaliyadda Dowlad Goboleedyada oo Gaowe ku kulmay
Goormaa ayey xukuumadda usoo gudbisay Baarlamaanka Hay’adda Damaanada Maalgashiga darafyada badan?